आज बाट अजोड इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार सुरु - E-BreakingNews
Home Karobar आज बाट अजोड इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार सुरु
आज बाट अजोड इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार सुरु
e-Breaking News August 01, 2020 Karobar,
नेप्से मा सुचिकृत अजोड इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार चौथो दिनमा सुरु भएको छ । नेप्सेले सुरु कारोबारका लागि ९७ देखि २९१ पैसासम्मको ओपन रेन्ज दिएको थियो । पहिलो कारोबार २९१ रुपैयाँमा खुला भएको हो । यही सीमाको उच्चतम विन्दुबाट कारोबार खुलेको हो ।
BOID भनेको के हो?
हितग्राहीले सिडिएससिमा डिम्याट् खाता खोल्नका लागि DP मार्फत् सम्पूर्ण विवरणहरु प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि प्रणालीबट उत्पन्न हुने १६¬ अंकको नम्बर नै हितग्राही नम्बर (BOID) हो ।
BOID किन आवश्यक छ?
BOID भविष्यमा गरिने सबै कारोबारहरुमा उल्लेख गर्नु पर्छ BOID एक युनिक नम्बर हो । यो नक्कल गर्न सकिन्दैन । अर्थात् दुई हितग्राहीहरुको समान BOID नम्बर हुन सक्दैन । जसले गर्दा गलत खातामा धितोपत्रहरु हस्तान्तरण हुन सक्दैन । रासस
By e-Breaking News at August 01, 2020